NCA-S EAO meets CSFoP to informally discuss the peace process in Myanmar
The delegates of NCA-S EAO met the representatives from Civil Society Forum For Peace at NCA-S EAO office, located on Shwe Li Road in Kamayut...
NCA-S EAO Office, Shwe Li Road, Kamayut Township, Yangon
Peace Commission explains about the four-point proposal of the Government
အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်း (၁၅:၃၀) နာရီ၌ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်တွင် NCA-S EAO နှင့် တွေ့ ဆုံပြီး လာမည့် သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဝေး (၄/ ၂၀၁၉) တွင် တင်ပြနိုင်ရန် အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆက်လက်ဖေါ်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ...
4th NCA-S EAO Working Groups' Meeting is being held in Chiang Mai
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၇) ရက်နေ့မှ (၁၉) ရက်နေ့အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ ယင်းအလုပ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် အလုပ်အဖွဲ့အသီးသီး၏ အစည်းအဝေးများမှ ဆွေးနွေးပြီး ရရှိလာသည့် စုစည်းချက်များအား PPST အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြ နိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ခြင်း၊...
5th NCA-S EAO Social Sector Workshop held in Yangon
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ (၅) ကြိမ်မြောက် လူမှု ရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ အလုပ် ရုံဆွေးနွေးပွဲ (5th NCA-S EAO Social Sector Workshop) ကို သြဂုတ်လ (၇) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ Mercure ဟိုတယ်တွင် စတင်ကျင်းပလျက်ရှိပြီး သြဂုတ်လ (၉)...
Mercure Hotel, Yangon, Yangon
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ဖက်ဒရယ်နှင့် ကျား-မ ရေးရာ ရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် NCA-S EAO ၏ စတုတ္တအကြိမ်မြောက် ငြိမ်း ချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အတွင်း အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှု မြင့်မားရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (4th Workshop for Women Leadership in...
The NCA-S EAO and IDEA jointly hold the workshop for Security Sector in Federal States and Comparative Studies
The NCA-S EAO and IDEA are jointly holding the workshop for Security Sector in Federal States and Comparative Studies in Yangon from 11 to 12...
ငြိမ်းချမ်းရေးုလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၃/ ၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ၊ NCA-S EAO အနေဖြင့် ရှေ့ဆက် ဆောင် ရွက်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများနှင့် လက်ရှိ လွှတ်တော်တွင်း လုပ်ဆောင်နေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များအပေါ် NCA-S EAO ဘက်မှ အမြင်များ အစရှိသည်တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး...
The Exclusive Interview with Comrade Myo Win (Part-1)
ငြိမ်းချမ်းရေးုလုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၃/ ၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ၊ NCA-S EAO အနေဖြင့် ရှေ့ဆက်ဆောင် ရွက်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုများနှင့် လက်ရှိ လွှတ်တော်တွင်း လုပ်ဆောင်နေသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ အပေါ် NCA-S EAO ဘက်မှ အမြင်များ အစရှိသည်တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး NCA-S...